एकाएक प्रचण्ड र ओली मिलेको खुलासा, यस्तो भएको रहेछ… « Channel Np
मनोरञ्जन टिभी प्रवास पत्रिका स्वास्थ्य/जीवनशैली अन्तर्वार्ता अचम्म धर्म/दर्शन कृषि/प्रविधि ENGLISH एकाएक प्रचण्ड र ओली मिलेको खुलासा, यस्तो भएको रहेछ…
प्रकाशित मिति : Monday, January 9th, 2017 at 12:04 PM
काठमाण्डौं, २५ पुस । एक दिनअघिसम्म आक्रामक शैलीमा संविधान संशोधन विधेयक कुनै पनि हालतमा संसद्मा टेबुल गर्न नदिने हुँकार गर्दै आएको प्रमुख विपक्षी दल एमालेले रहस्यमय तरिकाले आफ्नो अडानमा परिवर्तन देखाएको छ ।
आफूले यसअघि बसेको संसद् बैठकमा आइतबारबाट संसद् खुल्छ, खुलाउनुपर्छ भनेको जानकारी दिँदै उनले भनेकी थिइन्, संसद् संविधान, ऐन, कानुन, परम्परा र स्थापित मान्यतामा चल्ने हुँदा आज संसद् खुल्छ । म खोल्छु । तपाईंहरूले सहयोग गर्नैपर्छ ।
ुसंवेदनहीनता हो भने हस्तक्षेप पनि गर्थेुं, प्रधानमन्त्री र सभामुखको उपस्थितिमा बसेको पाँच दलको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीले भावुक हुँदै दर्जनौं प्रश्न र प्रसंग राखेका थिए ।
उनले बैठकमा भनेका थिए, तपाईंहरू सरकारमा बसेर धम्क्याउने रु मन्त्रीहरू मन्त्रीको स्तरमा नबस्ने ? सत्ता पक्षका नेतासमेत बर्बराउने ? आमजनता अदालतको फैसला सम्मान गर भन्दै हिँड्ने कुरालाई आत्मसाथ गर्नु पर्दैन ? त्यसैले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुहोस्, बाँकी सबै मिल्छ । एमाले अवरोधक होइन, निकास दिने पार्टी हो ।
ओलीको आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति सुनेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले अत्यन्त नम्रताका साथ भनेका थिए, मन्त्रीहरू कसले, कहाँ के भने ? हिजो तपाईं नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरूले पनि धेरै कुरा भनेका थिए । मेरा मन्त्रीहरूले संवेदनहीनता गुमाएका छैनन् । तपाईंले भनेजस्तै हुन्थ्यो भने तपाईंको मुखबाट प्रतिक्रिया आउनुअघि नै मैले हस्तक्षेप गरिसक्थें । सरकारले प्रतिपक्षी दललाई दिनुपर्ने सम्मानमा कुनै कमी गरेको छैन ।
सरकार संविधान, संसदीय विधि, प्रक्रिया र विगतको अभ्यास एवं परम्पराबाट जानुपर्ने हुँदा प्रतिपक्षीले संशोधन प्रस्तावलार्ई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने धारणा प्रधानमन्त्री दाहालले बैठकमा राखेका थिए ।
सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत हुँदै संशोधन विधेयक संसद्बाट फिर्ता नहुने र यो दुईतिहार्इ सांसदहरूको मत रहेको धारणा राखेका थिए ।
सहमति, सहकार्यका लागि नै सत्ता पक्षले एक महिनाभन्दा बढीको प्रतिपक्षको संसद् अवरोधलाई सम्मान गरेको देउवाको भनाइ थियो ।